ओलीलाई प्रचण्डको चेतावनीः आगोसँग नखेल्नुस्, खरानी पार्न सक्छ
उनले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा व्यक्तिवाद, अहंकारवाद, चरम महत्वाकांक्षा रहेको बताए । उनले भने, ‘भन्ने एउटा गर्ने अर्को ? त्यसको साक्षी हामी थिएनौँ ? हामी ज्युँदै छौँ र उपस्थित छौँ के, अब चल्दैन । किन पत्याउने तपाईंलाई ? गोहीको आँशु देखाउने ? प्रणालीको चिन्ता अझै ?’
आफूलाई युद्ध हारेर आएको भनिएको भन्दै प्रचण्डले आक्रोस पोखे । उनले आगोसँग नखेल्न पनि चेतावनी दिए । उनले भने, ‘आगोलाई फेरि चलाउन नखोजनुस् ओलीजी, सुषुप्त भएको आगो फेरि चलाउनुभयो भने यसले खरानी पार्न सक्छ ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ३, २०७८ १९:५५